Komishinii Poolisii Oromiyaa : 'Shirri qindaa'e akka fashalaa'u araarama tokko malee hojjenna' - BBC News Afaan Oromoo
Komishinii Poolisii Oromiyaa : 'Shirri qindaa'e akka fashalaa'u araarama tokko malee hojjenna'
10 Fuulbana 2019
Naannoo Oromiyaatti hiriirri beekkamtiis eeyyamas argate hin jiru kan jedhan Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Kaffiyaalaw Tafarraa "Hiriirri yoo bahame seeraan ala. Qaamoleen seeraa tarkaanfii akka fudhataniif ajajni kennameera," jedhan.
Qaamni seeramaleessummaa babal'isuufi nagaa booressuf naannicha keessatti bifa qindaa'een socho'aa jiraachuu komishinarichi ibsa miidiyaalef laataniin himaniiru.
Magaala Jimmaatti namootni gareen qindaa'uun walitti bu'iinsi akka uummamu socho'uu kan himan Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Kaffiyaalaw Tafarraa wanti karoorfatamee ture tumsa maanguddootaa fi qaamolee nageenyaan fashalaa'uu himan.
"Ta'e jedhanii olola sobaa qopheessuun osoo manni kiristaanaa, masqalli ykn konkolaataan hin gubatin olola sobaatin dhiigni akka dhangala'u fi lubbuun akka darbuf shirri xaxame hirmaannaa uummataa fi poolisiitiin fashalaa'eera" jedhan.
"Ummanni ofiin of eeguunsaa nageenya buuse" Poolisii Oromiyaa
"Ololatu deemaa ture hiriirichi bulchiinsa magaalaanis ta'e komishinii poolisii Oromiyaatin beekkamtin kan hin laatamnef ture" jechuun komishinarichi dubbatan.
Rakkinichi osoo hin uummamin dura dursinee beekna, qaamolee dhimmicha qindeessanis ni beekna kan jedhan Komishinar Kafyaalaw namootni amantaa dawoo godhachuun galma siyaasaa milkeessuf socho'an rakkinicha duuba jiraachuu himan.
Magaala Jimmaatti jalqaba hiriira bahuu qabna jechuun sochii taasifamuu sana boodas osoo rakkoon hin uummamin sagalee bilbila bataskaanaa bilbiluun namni akka walitti qabamuuf waamichi taasifame jedhan.
Quunnamtii bilbilaan taasifamaa tureenis namootni aanaalee garaagaraa irraa gara magaala Jimmaatti akka imalan taasifamuu himan.
Hordoftoota amantaa Ortodoksii mana amantaa gubate jedhame gahanif eegumsa gochuu, kunneen gara magaala Jimmaatti imalaa turan akka deebi'an gochuu fi marii maanguddoota walin taa'amen tasgabbiin uummamuusaa konishinarichi himaniiru.
Namootni olaantummaan qindeessaa turanis to'annoo jala oolanii marii maanguddoota walin taasifamen gadhiifaman jedhan.
Rakkoon walfakkaataan godinaalee Oromiyaa garaagaraatti akka uummamuf karoorfatamee hojjetamaa akka jiru quba qabaachuus komishinarichi himaniiru.
"Dhimmi kun akka fashalaa'u araarama tokko malee hojjenna jedhan. Uummatnis osoo hin burjaaja'in olaantummaa seeraa mirkaneessuf akkuma duraanii nu cinaa dhaabbachuun nageenya akka eegsisu waamicha dhiyeessina" jedhan.
Hawaasni miiraan osoo hin taanee yaadaan tasgabbaa'anii qaamolee nageenyaa walin akka hojjetan waamicha dhiyeessan.
Dhumarrattis "barri kun bara addaa kan jijjiirama argame itti fullaasnu dha" kan jedhan komishinarichi "bara uummatni Oromoo ayyaana Irreechaa magaala Finfinneetti kabajuuf karoorfatee jirutti namootni kallattii heddun qindaa'anii jeequmsa kaasuf socho'aa itti jiranidha" jechuun himan.
"Yeroo ammaattis naannoo keenya keessatti hiriirri amantaan walqabatee waammame Komishinii Poolisii Oromiyaatin beekkamtiis ta'e heeyyama kan hin argannedha" jedhaniiru.
Obbo Shimallis Abdiisaa: 'Tokkummaan Oromoo dubaatti deebi'uu hin danda'u'
"Uummanni ofiin of eeguunsaa nageenya buuse" Poolisii Oromiyaa
'Naannoo ta'uun furtuu waan hundaa miti'